विदेश – Page5– HarekNews
सिरियामा गोलावारी हुँदा राष्ट्रसंघ रुनै लाग्यो !
४ मंसिर २०७३, शनिबार १५:३५	Leaveacomment
काठमाण्डौ मंसिर ४ सिरियाको एलेप्पो शहरमा रुस समर्थित सरकारी सेनाको चौथो दिने हवाई आक्रमण र गोलावारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले दर्दनाक भनेको छ । सिरियाको पुर्वी विद«ोही नियन्त्रित शहर एलेप्पोमा अमेरिकी समर्थित विद«ोही समुह हटाउन सरकारी सेनाले भिषण आक्रमण र गोलाबारी गरिरहेको ...
जिका भाईरस निमिट्यान्न भएकै हो त ?
४ मंसिर २०७३, शनिबार १५:०८	Leaveacomment
काठमाण्डौ मंसिर ४ विश्व स्वास्थ संगठन (डब्लु एच ओ)ले लामखुट्टेबाट सर्ने जिका भाइरस संक्रमणको खतरा टरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालिन अवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । जिका भाइरसको संक्रमण तिव्ररुपमा बढेका कारण ९ महिना पहिले डब्लु एच ओले जिका संक्रमणलाई ...
बोको हरामले बालबालीकाको खुसी हराम गराईदियो, भोकभोकै मर्दै बालबालिका !
१ मंसिर २०७३, बुधबार १०:००	Leaveacomment
काठमाण्डौ मंसिर १ अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा बोको हरामका कारण केहि महिना यता ७५ हजार बालबालिका भोकमरीले मर्न लागेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय सहायता संयोजक पिटर लुण्डबर्गले ४० लाख बालबालिका मध्ये त्यहाँका ७५ हजार बालबालिकालाई ...
नेपालमा जाडोले थुरथुर कामिदा वैज्ञानिक भने धेरै गर्मी हुने बताउछन् यसरी
३० कार्तिक २०७३, मंगलवार १५:२४	Leaveacomment
काठमाण्डौ कात्तिक ३० यो वर्ष अहिलेसम्मकै गर्मी वर्ष हुने देखिएको छ । प्रारम्भीक तथ्यांक अनुसार सन् २०१६ को पहिलो ९ महिना अघिल्लो वर्ष सन् २०१५ भन्दा गर्मी हुने देखिएको हो । वैज्ञानिकहरुले बताए अनुसार ९ महिनाको तथ्यांकले यो वर्ष गएको ...
ट्रम्प र पुटिनबिच बलियो बन्ने सहमति !
३० कार्तिक २०७३, मंगलवार १५:२०	Leaveacomment
काठमाण्डौ कात्तिक ३० अमेरिका र रुसबीचको चिसिएको सम्बन्ध सुधारका विषयमा अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटनबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । ट्रम्पले, चुनाव जितेपछि पहिलोपटक रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको हो । टेलिफोन मार्फत ...
आप्रवासीलाई लखेट्न थाले अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति ट्रम्पले !
२९ कार्तिक २०७३, सोमबार १२:३६	Leaveacomment
काठमाण्डौ कात्तिक २९ अमेरिकी नव–राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ३० लाख अबैध आप्रवासी आफ्नो निशानामा रहेको बताउनु भएको छ । अमेरिकी समाचार संस्था सिवीएससँगको साक्षात्कारमा उहाँले अवैध आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट हटाउने अथवा जेलमा हाल्ने बताउनुभएको वीवीसीले उल्लेख गरेको छ । उहाँले विशेषगरी आफ्नो ...
नेपालको जत्तिकै न्युजिल्याण्डमा भूकम्प जाँदा २ जनाको मृत्यु,नेपालमा भने १० हजार !
२९ कार्तिक २०७३, सोमबार १२:३२	Leaveacomment
काठमाण्डौ कात्तिक २९ न्यूजिल्याण्डमा हिजो गएको शक्तिशाली भुकम्पमा परी कम्तिमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार कैयौँ मानिसहरु भग्नावशेषभित्र पुरिएको आशंका गरिएको छ । क्राइष्टचर्चभन्दा ९५ किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दू बनाएर हिजो मध्यरातमा ७ दशमलव ८ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प ...
सधैँ एकअर्कालाई कुटाकुट गर्नेबिच शान्ति सम्झौता
२८ कार्तिक २०७३, आईतवार १६:२२	Leaveacomment
काठमाण्डौ कात्तिक २८ कोलम्बिया सरकार र फार्क बिद्रोहीबिच नयाँ शान्ति सम्झौता भएको छ । ६ हप्ताअघि भएको जनमतसंग्रहले यसअघिको शान्ति सम्झौता अस्वीकार गरेपछि कोलम्बिया सरकार र फार्क बिद्रोहीले नयाँ शान्ति सम्झौताको घोषणा गरेका हुन् । शान्ति सम्झौताको विपक्षमा रहेका पूर्व ...
अरुलाई तर्साउने डोनाल्ड ट्रम्प आफै तर्सिए !
२१ कार्तिक २०७३, आईतवार १३:१९	Leaveacomment
काठमाण्डौ कात्तिक २१ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी कार्यक्रममा हुलदंगा भएको छ । नेवादाको ¥यालीलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला मञ्च नजिकै हुलदंगा भएपछि सेक्रेट सर्भिसका एजेन्टले ट्रम्पलाई सुरक्षा दिएर मञ्चबाट लगेका थिए । बीबीसीका अनुसार हुलदंगा मच्चाएको ...
अमेरिकामा आतंकवादीले मौकामा चौका हान्ला ?
२० कार्तिक २०७३, शनिबार १६:२१	Leaveacomment
काठमाण्डौ कात्तिक २० अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनावको मौका पारेर आतंकबादी आक्रमण हुनसक्ने भन्दै त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । चरमपंथी समुह अलकाइदाले राष्ट्रपतीय चुनावका दौरान आक्रमण गर्न सक्ने गोप्य सुचना पाए लगत्तै अमेरिकाको सुरक्षा कडा पारिएको र त्यसबारे छानविन भईरहेको ...